EKWEREMADỤ:BUHARỊ BUTERE ỌGBAGHARA NA NAỊJIRIYA – hoo!haa!!
EKWEREMADỤ:BUHARỊ BUTERE ỌGBAGHARA NA NAỊJIRIYA
Osote onyeisi Sineti Ala anyị bụ Ọkammụta Ike Ekweremadụ ekwuola hoo!haa!! na ọ bụ usoro ọchịchị ịkpa oke na mmegbu e jiri mara Onyeisiala Buharị kpatara akpọmasị, ọgbaghara nakwa ịkwafu ọbara jizi arị ibe ya elu na Naịjiriya taa.
Ọ kọwara na ọ bụ etu Buharị siri kpọọ ekwo nkụ were chee ihu n’otu mpaghara ala anyị na ndi o nyere ọkwa, nke kacha njọ bụ na ndi nile nọ nọzị na Kansụl ukwu nke ncheta ala anyị si otu ebe nke butere oke ntamụ ma mebikwaa ezi ịhụnanya dịbụ na mbụ.
Anyị ga-echeta na n’ime izu ụka gara aga ndi sinetọ si mpaghara Ala-Igbo kpọrọ ganị ganị ka ọgbakọ sineti na-aga n’ihu n’ihi etu Buharị siri kpachapụ Ndigbo site ime ka ha gbara aka n’ọchịchị ya. Onye welitekwara okwu ahụ bụ Ọkammụta Ekweremadụ. Oge n’adịghị anya, ndi ọrụ nchekwa DSS mekwara Sinetọ Enyinnaya Abaribe akaja ma kpọchikwaa ya na-eme nta,na-eme imo.
Ekweremadu gbara ama a na ngwụcha izu ụka gara aga n’Enugwu na mmemme idu n’iyi ọrụ Gọvanọ otu Rotary International nke Naịjiriya ngalaba 9142. Hon Tobi Okechukwu, onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme kọwara nkewa nakwa ọgbaghara karịzịrị taa maka na onyeisiala Buharị bụ okwu ọzọ, eme ọzọ. Na mgbe nile ọchịchị nọ ugbua na-ekwu maka udo n’ịhụnanya mana akpọmasị, ịkpa oke nakwa tigbuo zogbuo bụ akparamagwa ejirimara ha.
Okechukwu bụ onyeisioche kọmitii nke ụlọ nzukọ omebeiwu nta ala anyị kwukwara na sọọsọ ihe ga-eweta udo na Naịjiriya bụ Buharị iwepụ aka enwe n’ofe site na ịkwụsị oke ịkpa oke nke dị ya n’ahụ
Previous Post: EWU
Next Post: ONYE FULANI NA-EKWUSA OZI ỌMA KRAIST.